ကြောင်လေးတွေမှာ အမွေးကျွတ်ခြင်း 😸😾 – Petunity
ကြောင်လေးတွေမှာ အမွေးကျွတ်ခြင်း 😸😾
အမွေးကျွတ်တယ်ဆိုတာ ကြောင်တွေရဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ အပြင်မှာနေတဲ့ ကြောင်တွေက နွေဦး နဲ့ ဆောင်းဦးတွေမှာ အမွေးပိုကျွတ်ပြီး ဆောင်းတွင်းမှာတော့ သိပ်ကျွတ်လေ့မရှိပါဘူး။ အိမ်တွင်းမှာပဲနေတဲ့ ကြောင်တွေကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အမွေးကျွတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ရဲ့ကြောင်မှာ အမွေးကျွတ်တာများပြီး အကွက်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်၊ သိသိသာသာ အမွေးတွေအရမ်းကျွတ်နေပြီဆိုရင်တော့ တိရစ္ဆာနိဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါပြီ။
ဘာကြောင့်ကြောင်တွေ အလွန်အကျွံ အမွေးကျွတ်တာလဲ? 🙀
ဆေးဝါးဆိုင်ရာ၊ အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကြောင့် ကြောင်တွေမှာ သာမန်ထက်ပို၍ အမွေးကျွတ်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိင်ပါတယ်။ သာမန်ထက်ပို၍ အမွေးကျွတ်ခြင်း (သို့) သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် အကွက်များတွေ့ရှိပါက တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံးပြသင့်ပါတယ်၊၊ ကြောင်လေးတွေမှာ ထိုလက္ခဏာများတွေ့ရှိခြင်းသည် အောက်ပါအကြောင်းအရာများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- Allergic ထခြင်း
- Bacteria များကူးစက်ခံရခြင်း
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် (သို့) နို့တိုက်ချိန်ဖြစ်ခြင်း
ဘယ်လို အမွေးကျွတ်ခြင်းကို လျှော့ချမလဲ? 😿
တကယ်လို့ သင့်ကြောင်လေးဟာ အမွှေးတွေအများကြီးကျွတ်နေပေမဲ့ ဆရာဝန်ကလည်း ထွေထွေထူးထူးကျန်းမာရေးဆိုးရွားတာ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ကြောင်လေးရဲ့ အမွှေးကျွတ်တာလျော့ချဖို့ အောက်ပါအရာများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
- သူ့ကို ကျန်းမာစေတဲ့၊ မျှတတဲ့ အစားအသောက်တွေ ကျွေးပါ။
- သူ့ကို နေ့စဉ် ဘီးဖီးပေးပါ။
သေသေချာချာ ဘီးဖီးမပေးတာဟာ အထူးသဖြင့် အမွှေးရှည်တဲ့ ကြောင်တွေမှာ အမွှေးတွေ ဂျပ်ခဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အမွှေးတွေကြောင့် ကြောင်တွေဟာ နာကျင်မှုခံစားရနိုင်တဲ့အပြင် အရေပြားရောဂါတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။